Nhazi ọkwa ọhụrụ nke oke ifufe Saffir-Simpson | Netwọk Mgbasa Ozi
United States National Hurricane Center (NHC) weputara a mgbanwe na Saffir-Simpson Ajọ Ifufe, nke na-atụ ike ikuku nke ifufe nke ebe okpomọkụ mgbe ha ruru ụdị ajọ ifufe. Ọnụ ọgụgụ a sitere na 1 (ike ifufe dị ala) ruo 5 (oke ikuku dị elu ma ya mere nke nwere ike imebi emebi).
A na-eme mgbanwe a iji mee ka ntụgharị nke mpaghara ihe eji eme ka ị mata ọsọ ọsọ ọsọ. Ebe ọ bụ na kilomita kwa elekere (Km / h), akara (kt) na kilomita kwa elekere (mph) ka a na-ejikarị eme ihe, ọkwa gara aga na-eduhie mgbe ị na-achịkọta ụkpụrụ nke ikuku ikuku na oke n'etiti udiri iche.
Dị ka e gosiri site Obodo Ajọ Ifufe Mba Ọhụrụ a ga-adị irè dị ka nke May 15, 2012, maka Oke Osimiri Pasifik, North-Eastern Pacific Ocean na Ọwara Oké Osimiri California, ebe a ga-eji ya mee ihe na June 1, 2012 na Atlantic Ocean, Gulf of Mexico na The Oke Osimiri Caribbean.
Site na nhazi ọkwa ọhụrụ, edemede 1 na 2 anaghị agbanwe agbanwe. A ga - enweta ụdị 3 ugbu a site na ifufe na - akwado 96 ruo 112 kt (ma ọ bụ 111 ruo 129 mph ma ọ bụ 178 ruo 208 km / h). A ga-edekọ edemede 4 ma ọ bụrụ na ike dị n'etiti 113 ruo 136 kt (130 ka 156 mph ma ọ bụ 209 ruo 251 km / h). Na ngwụcha, a ga-eji ifufe tụọ ikuku nke ise n'etiti 5 kt ma ọ bụ karịa (137 mph ma ọ bụ karịa ma ọ bụ 157 km / h ma ọ bụ karịa).
Hurlọ Ọrụ Ajọ Ifufe Mba gosipụtara na nkwupụta ahụ anyị kwuburu na ajọ ifufe gara aga na akụkọ ntolite agaghị ata ahụhụ enweghị mgbanwe Banyere ike nke ifufe nke ha jiri rute ala, ya bụ, ọnọdụ ọhụrụ a ga-adị ire maka oge ajọ ifufe ndị a na-esote.
Isi: Oké ifufe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nhazi ọkwa ohuru ohuru nke Saffir-Simpson
Tinye Njikọ na ibe a iji zighachi Ahie Simpson a na enyi gị